कृष्णबहादुर महरा १४हजार मतान्तरले विजयी
मंसिर २४ २०७४ .
दाङ, मंसिर २३ बाट माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा १३ हजार ९२३ मतान्तरले विजयी भएका छन्। महराले ३९ हजार ९५९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजु खनालले २६ हजार ३६ मत प्राप्त गरेका छन्।
नारायणकाजीलाई पछि पार्दै डा.भट्टराई विजयी
गोरखा,मंसिर २३ गोरखा क्षेत्र नम्बर–२ बाट नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ६ हजार ८ सय ७४ मतले पछि पार्दै डा.भट्टराई निर्वाचित भएका हुन् । भट्टराईले ३१ हजार ८०७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले २४ हजार ९३३ मत हाँसिल गरेका छन् । यसैबीच...
कांग्रेसले काठमाडौंमा शाख जोगायो
काठमाडौं,मंसिर २३ एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएर बाम गठबन्धनको घोषणा गरेसँगै सिंगो कांग्रेस पंक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आफ्नो स्थितिको आंकलन गरेर आत्तिए पनि शाख जोगाउन सफल भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आउने क्रममा कांग्रेसले आंकलन गरे भन्दा राम्रै नतिजा पाएको छ । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठम...
रविन्द्र अधिकारी लगातार तेस्रो पटक विजयी
पोखरा, मंसिर २३ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी विजयी हुनुभएको छ । कास्की जिल्लाबाट लगातार तेस्रो पटक अधिकारीले विजयी हासिल गर्नुभएको हो । अधिकारीले २०६४ मा माओवादी नेता झलकपाणी तिवारीलाई पराजीत गर्नुभएको थियो भने दोश्रो पटक २०७० मा काँग्रेस नेता शोभियतबहादुर अधिकारीलाई पराजीत गरि विजयी हुनुभयो । उहाँले २७ हजार २ सय ७ मत ल्याएर काँग्...
बागलुङमा कांग्रेस क्लीन स्वीप
मंसिर २३ २०७४ .
बागलुङ, मंसिर २३ बागलुङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेस क्लिन स्वीप भएको छ। गत २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्टलाई क्लीन स्वीप गरेको कांग्रेस चार बर्ष पछि भएको निर्वाचनमा सबै स्थानमा पराजित भएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई/दुई सिट जितेका छन्। शनिवार बिहान सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाम अनुसार बागलुङ न...
पशुपति शमशेर ,एमालेका शेरबहादुर तामाङ विजयी
सिन्धुपाल्चोक, मङ्सिर २३ सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। एमालेका शेरबहादुर तामाङले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई ८ हजार ३२ मतले पछि पारेका हुन्। शेरबहादुरले ३८ हजार ४ सय १ मत पाएका छन्। राणाले ३० हजार ३ सय ६९ मत पाए ।
काठमाडौमा एमालेका जीवनराम र कृष्ण राई श्रेष्ठ विजयी, कांग्रेसका प्रकाशमान र गगन थापा विजयी
काठमाडौं, मंसिर २३ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ मा एमालेका जीवनराम श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ । उहाँले १३ हजार ३ सय ९७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका नविन्द्रराज जोशीले १२ हजार ९ सय ५३ मत ल्याउनुभयो । त्यस्तै काठमाडौँ ३ बाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपा एमाले नेता कृष्ण राई विजयी हुनु भएको छ । राईले ...
मोरङ ६ मा एमालेका लालबाबु पण्डित विजयी
मोरङ, मंसिर २३ मोरङको क्षेत्र नम्बर ६ मा नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डित विजयी हुनु भएको छ । लालबाबुले ६७५ मत बढी ल्याई विजयी हुुनभएको हो । कांग्रेसका डा. शेखर कोेइरालालाई हराउँदै पण्डित विजयी हुनुभएको हो । लालबाबुले ३३ हजार ९४१ र शेखरले ३३ हजार २६६ मत पाउनुभयो ।
रुपन्देहीवाट दुइ उपमहासचिवको पक्का
बुटवल मंसिर २२ । रुपन्देहीमा एमालेका तीन हेवीवेट उम्मेदवार छन् । दुइ उपमहासचिव मध्ये एकजना विष्णु प्रसाद पौडेलको सुनिश्चितलाई मतदानपूर्वनै मानिए पनि अर्का उपमहासचिव घनश्याम भूसालको मतगणनाको प्रारम्भिक परिणामले सुनिश्चित प्राय ः गरेको छ । रुपन्देहीकोे २ नं. क्षेत्रवाट एमालेका पौडेलले कांग्रेसका युवराज गिरी भन्दा झण्डै तेब्बर मत प्राप्त गरेक...
रामचन्द्र ५ सय मतले पछाडि
पोखरा, मंसिर २२ देशव्यापी रुपमा अग्रता लिइरहेको वामगठबन्धनले तनहुँ– १ को प्रारम्भिक मतगणनामा पनि अग्रता लिएको छ। कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एमाले उम्मेदवार भन्दा ५ सय मतले पछि परेका छन् । तनहुँ–१ को प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका कृष्ण (किसान) कुमार श्रेष्ठले २ हजार २ सय ६४ मत पाएका छन्। ...
हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा विजयी
मंसिर २२ २०७४ ekhabarnepal
हुम्ला । हुम्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा विजयी हुनु भएको छ । उहाँले ८ हजार ४ सय ९१ मत ल्याउनु भएको छ । उहाँका प्रतिद्वन्द्धी कांग्रेसका मंगलबहादुर शाहीले ८ हजार ४ सय ४४ मत ल्याउनुभयो ।
काठमाडौं क्षेत्र नं. २ मा माधवकुमार नेपालको अग्रता
मंसिर २२, काठमाडौं काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रारम्भिक मतपरिणम सार्वजनिक भएको छ ।प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार माधवकुमार नेपालले सुरुवाती अग्रता कायम गरेका छन् ।नेपालले १ हजार ३४ मत ल्याउँदा कांग्रेस उम्मेदवार दिपक कुइँकेलले ४ सय ६७ मत ल्याएका छन् ।त्यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार डा. सूर्यराज आचार्यले ४ सय...
बझाङमा वाम गठबन्धन विजयी
२२ मंसिर, बझाङ । बझाङमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एमालेका भैरवबहादुर सिंह विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ३४ हजार ६ सय १२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्धी लाेकतन्त्रिक गठबन्धनका पृथ्वीबहादुर सिंह २६ हजार ९ सय १० मत ल्याउनु भयो ।
काठमाडौं १ मा प्रकाशमान सिंह अगाडि छन् भने , रवीन्द्र मिश्र पछ्याउदै
२२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वाधिक चासोमा रहेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को मतगणनाको सुरुवाती परिणाम आएको छ । शुरुवाती चरणमा कांग्रेस नेता प्रकाशमानसिंहले अग्रता लिएका छन् भने विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रले सिंहलाई पछ्याइरहेका छन् । कांग्रेस नेता सिंहले ९३६ मत ल्याउँदा रविन्द्र मिश्रको ६७० मत आएको छ । दुईवीचको मतान्तर २६६ रहेको छ ।वाम गठबन्धनका ...
प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म वाम गठवन्धनको अग्रता कायम,
काठमाडौं । प्रनिधिसभा निर्वाचानको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार अहिलेसम्म वाम गठवन्धनले अग्रता लिएको छ । वाम गठवन्धनले ३० स्थानमा अग्रता लिएको छ भने लोकतान्त्रिक गठवन्धले ४ स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ । अन्य पार्टीले भने एक स्थानमा अग्रता लिएको छ । अहिले मतगणना जारी छ ।
काठमाडौं ५ मा एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलको अग्रता
२२ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं ५ को प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त पछिल्लो अपडेट अुनार एमाले उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले अग्रता कायम गरेका छन् । उनले ६ सय ८० मत ल्याएका छन् भने कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशशरण महतले २ सय ९८ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै, विवेकशील साझाका उज्जवाल थापाले ८८ मत ल्याएका छन् ।
पश्चिम रूकुमवाट जनार्दन शर्मा विजयी
मंसिर २२ २०७४ .
रूकुम,मंसिर २२ बाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर पश्चिम रूकुमवाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ । यस अघि रुकुम पूर्वमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कमला रोका विजयी भइसक्नुभएको छ । रोकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका हरिशंकर घर्तील...
मुस्ताङमा तीनै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
जोमसोम, २२ मंसिर – हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा एक प्रतिनिधीसभा र दुई प्रदेशसभा सदस्य गरी तीनै स्थानमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। प्रतिनिधीसभातर्फ वामगठबन्धनबाट प्रेमप्रसाद तुलाचन ३५४४ मत लिएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले ३१८१ मत ल्याएका थिए। यी दुई उम्मेदवार दोश्रो संविधानसभा निर्...
वर्षमान पुनको झन्डै दोब्बर मतको अग्रता
रोल्पा, मंसिर २२ रोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भारी मतले अगाडि हुनुहुन्छ । उहाँले ५०५१ मत ल्याउनुभएको छ भने कांग्रेसका तर्फबाट अमरसिंह पुनले २४९९ मत ल्याउनुभएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङे विजयी
मनाङ,मंसिर २२ दिपक मनाङे नामले परिचित स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ मनाङको प्रदेश 'ख'बाट प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा विजयी भएका छन्। मनाङेले १ हजार ४१० मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदै अब प्रदेशसभाको माननिय हुने भएका हुन्। उनी विजयी भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेपनि आयोगले बताएको छ। मनाङ प्रदेश 'ख' मा माथिल्लो मनाङको ७ गाविस मिलेर...
पहिलो चरणका दुई तिहाई सिटमा वामगठबन्धनको अग्रता
काठमाडौं, मंसिर २१ पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ३२ जिल्लाको मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाममा एमाले–माओवादी केन्द्र सहितको वामगठबन्धनले फराकिलो अग्रता हासिल गरेको छ। कतिपय स्थानमा वामगठबन्धनकै विद्रोही उम्मेदवारहरु नै अग्रस्थान देखिएका छन्। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाको ७४ स्थानको मतगणना बि...
मुस्ताङबाट एमाले प्रेम तुलाचन विजयी
काठमाडौं, मंसिर २२ प्रदेशसभासँगै प्रतिनिधिसभामा पनि एमालेले पहिले खाता खोलेको छ। एमालेका प्रेमप्रसाद तुलाचन मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्। निर्वाचन आयोगले जनाए अनुसार एमालेका तुलाचनले ३५४४ मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले ३१८१ मत पाएका छन्। तुलाचन स‌ंघीय नेपालको पहिलो निर्...
रुकुम पूर्वबाट माओवादी केन्द्रकी कमला रोका विजयी
काठमाडौं, मंसिर २२ । रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रकी कमला रोका विजयी भएकी छन् । रोका पहिलो महिला निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी छन् । रोकाले १० हजार ४३४ मत पाइन् । उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका हरिशंकर घर्तीले ४ हजार ४०६ मत प्राप्त गरे । कमला रोकाको जन्म २०३२ साल पुस १५ गते रुकुमको प्वाँङमा भएको...
प्रतिनिधिसभामा मनाङबाट एमाले पाल्देन छोपाङ विजयी
काठमाडौं,मंसिर २२ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा मनाङबाट पनि जित हात पारेको छ । मनाङबाट पोल्देन छोपाङ गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङलाई २ सय ८९ मतल पराजित गर्दै गुरुङ विजयी भएका हुन् । पोल्देन छोपाङ २ हजार ३ सय मतसहित जित हात पार्दा प्रतिद्वन्द्वी टेकबहादुरले २ हजार २१ मत...
६७ प्रतिशत मतदान,अर्घाखाँचीको २ वटा मतदानकेन्द्रको स्थगित
काठमाडौं, मंसिर २१ दोस्रो चरण अन्तर्गत ४५ जिल्लामा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छिटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सकिएपछि आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत आज कुल ६७ प्रतिशत मत खसेको छ। सबैभन्दा बढी गुल्मीमा ७१ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। पहिलो चरणको तुलनामा दोस्र...
मतगणना गर्दा कुन मतपत्र पहिले गनिन्छ ?
मंसिर २१ २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं, २१ मंसिर - दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसक्दा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनकै मतपेटिकाहरु अझै खोलिएको छैन ।निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएपछि पहिलो चरणका मत पेटिकाहरु खोल्ने तयारी गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिने वित्तिकै पहिलो चरणको निर्वाचनका मत पेटिकाहरु खुल्ने छन् । साँझ ५ बज्ने वित्तिकै पहिलो चरणको मतगणना शुरु हुनेछ । आज...
१ बजेसम्म ४० प्रतिशत मत खस्यो
काठमाडौं । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा दिउँसो १ बजेसम्म ४० प्रतिशत मतदान भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका आनुसार अहिले सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण एवम् उत्साहजनकरुपमा मतदान कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १२८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा सदस्यका लागि २५६ निर्वाचन क्षेत्र...
भक्तपुरको मतदान केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झपड
२१ मंसिर, काठमाडौं । भक्तपुरको बालकोटस्थित गणेश प्राविको मतदान केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झपड भएको छ । दुईजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा युवा संघका केन्द्रीय सदस्य रोशन बस्नेतसमेत छन् । अर्का व्यक्तिको परिचय खुलेको छैन । उनीहरुको भक्तपुरस्थित नागरिक हस्पिटलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।मतदान भइरहेका बेला कांग्रेस कार्यकर्...
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बाट विष्णुप्रसाद पाैडेलले मतदान गर्नुभयो
मंसिर २१ -प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, रुपन्देहीका सुर्यध्वजाबाहक उम्मेदवार नेकपा ( एमाले ) उपमहासचिब एवं पुर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिले बिहान ७:१५ बजे बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ स्थित पश्चिमान्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ४, सिद्धार्थ राजमार्गमा मतदान गर्नु भयो ।
मतदान गर्न शव बोकेरै मतदान केन्द्रमै पुगे मलामी
२१ मंसिर, पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–७, मैनादीको हर्केडाँडाकी एक महिलाको मृत्यु भएपछि शव बोकेरै मतदान केन्द्रमा मलामी मतदान गर्न पुगेका छन् । हर्केडाँडाकी १०१ वर्षीया लिलाकुमारी गैरेको बिहीबार बिहान मृत्यु भएपछि मलामी शव बोकेर नै मतदान केन्द्रमा पुगेर मृतकका छोरा युद्धराज गैरेले बतासे मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।उनीलगायत १६ ज...
अहिले सम्म २५ प्रतिशत मत खस्यो - निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बिहान १० बजेसम्म २५ प्रतिशत मतदान सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशका ४५ जिल्लामा बिहान सात बजेदेखि मतदान शुरु भएको हो । निर्वाचनमा एक करोड २२ लाख ३५ हजार ९९३ मतदाता सहभागी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १२८ निर्वाचन क्षेत्रमा र प्रदेशसभा सदस्यका ल...
बिहान ७ बजेबाट मतदान शुरु
काठमाडौं, २१ मंसिर, अहिले ४५ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन जारीे छ । बिहान ७ बजे शुरुभएको मतदान बेलुका ५ बजेसम्म जारी रहनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचन यही मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा भएको थियो । ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२८ र प्रदेशसभाका २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिनिधिसभाका ...
ढुक्क भएर मतदान गर्न आयोगको अपील,चुनावको तयारी पूरा
मंसिर २१ २०७४ .
परिचय खुल्ने सरकारी प्रमाणपत्रका अाधारमा भोट हाल्न पाइने काठमाडौं , मंसिर २० । दोस्रो चरण अन्तर्गत भोलि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको तयारी पूरा भएको छ । ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका १२८ प्रदेशसभाका २५६ क्षेत्रमा भोलि हुने मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । मतद...
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने काँग्रेस कार्यकर्ता दोभानमा पक्राउ
पाल्पा मंसिर २०– तिनाउ गाउँपालिका वडा नं २ डोल गाउँमा मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाड्न लागेका नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी स्थानीय जनताले प्रहरीलाई बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मौन अवधिमा तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानबाट भोट माग्दै पैसा बाँड्न लागेका काँग्रेस कार्यकर्ताबाट १ लाख ५६ हजार नगद स्थानीय मतदा...
अछाममा मतदातालाई पैसा बाड्दै गरेको अवस्थामा सदस्य पक्राउ
अछाम । जिल्ला समन्वय समिति अछामका सदस्य तुलाराम साउद मतदातालाई पैसा बाड्दै गरेको अवस्थामा समातिएका छन् । चौरपाटी गाउँपालिका वडा नं.३ को सोकटस्थित सरकान्ना टोलमा गयराति मतदातालाई पैसा बाँडदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको स्थानीय झंकर विकले जानकारी दिए ।उनले गतराती सोकटस्थित सरकान्ना टोलमा मतदातालाई प्रभावमा पार्न पैसा बाँडिएको खबर पाएपछि उन...
नेपालले युएईलाई २२२ रनको लक्ष्य पेश
आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरण अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले युएईलाई २२२ रनको लक्ष्य पेश गरेको छ । युएईको शेख जायद रंगशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषावकरकत्त अर्धशतकीय पारीको सहयोगमा ६ विकेट गुमाएर २२१ रनको योगफल बनायो । घरेलु टोली युएईले केहिबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ ।ने...
युएईबिरुद्धको खेलमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल ५४ रनमा आउट
२० मंसिर, काठमाडौं । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरण अन्तर्गत युएईबिरुद्धको खेलमा नेपाली ओपनर तथा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएका छन् ।२४.२ ओभरमा दोस्रो विकेटका रुपमा युएईका रोहन मुस्तफाको बलमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा पर्नुअघि मल्ले ५४ रनको संयमित अर्धशतकीय पारी खेले । युएईको शेख जायद रंगशालामा ८३ बलको सामना गरी मल्लले ६ च...
छोरी,जन्मिने बित्तिकै २० हजार
मंसिर २० २०७४ .
जन्मिने बित्तिकै २० हजार र स्वास्थ्य बिमाको सुविधा बुटवल । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) गाउँमा कुनै कार्यक्रममा डुल्दै थिए, स्थानीय कुनै महिलाले परिवारमा आइपरेका पीडा सुनाइन् । छोट्की रामनगरकी ती महिलाको बेदनाले अध्यक्ष केवटको मनस्पटल नै हल्लाइदियो । त्यसबेला उनले आफ्नै टोलछिमेक र अन्य क्षेत्रका समुदायमा भइरहेका र दबेका क...
सर्लाहीमा बस दुर्घटना हुदा १९ जना घाईते
सर्लाही मंसिर १९-बिपरित दिसाबाट आइरहेको मोटरसाईकललाई जोगाउन खोज्दा सर्लाहीको सासापुर स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यात्रुबस पल्टिएको छ। दुर्घटनामा १९ जना घाईते भएका छन्। विपरित दिशाबाट आईरहेको ना.२८ प ८२८० नम्बरको मोटरसाईकललाई जोगाउन खोज्दा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गईरहेको ना.४ ख ६०५८ नम्बरको यात्रुबस मंगलबार बिहान ११ बजे पल्टिएको हो। बसको ठक्करब...
← Previous 12… 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 77 78 Next →